Eto an-drenivohitra : maherin’ny 858 ireo 4’mi tsy manan-kialofana | NewsMada
Eto an-drenivohitra : maherin’ny 858 ireo 4’mi tsy manan-kialofana
Nanomboka nanao ny fanisana ireo olona tsy manan-kialofana sy mpatory an-tsena na 4’mi teto an-dRenivohitra ny minisiteran’ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy tamin’ity herinandro ity.
Voaksik’izany ireo 4’mi mirenireny eny Ambohijatovo, Ambohidahy Ambatomena, Antaninarenina, Analakely, Soarano ary Tsaralalàna. Nitohy teny Behoririka, Andravoahangy, Ambodivona ary Antanimena ny fanisana azy ireo.
Hatramin’izao, nahatratra 858 ireo olona tsy manan-kialofana voaisan’ny minisiteran’ny Mponina. Avy amin’ny fianakavian 379 izy ireo. Ankizy avokoa ny 418 ary zokiolona ny 28. Vehivavy mampinono kosa ny 27.
Maniry ny hody any amin’ny tany niaviany ny 59 amin’ireo olona ireo. Te hiverina eny amin’ny fiarahamonina nisy azy fahiny kosa ny 179 ary maniry ny hipetraka amin’ny toerana fandraisana ny olona sahirana ny 128. Ireo 4’mi 13 hafa kosa mbola te hijanona eny an’arabe hatrany.
Hitohy hatrany ny fanisana ireo tsy manan-kialofana sy mpatory an-tsena ireo mandra-pahazo ny lisitra mazava sy ny isa marina hahafantarana ilay olona marina sy ny hametrahana azy ireo. Hisy ny torolalana omena azy ireo avy eo hahafahany miaina sy mahaleo tena ara-pivelomana eo anivon’ny fiarahamonina.
71 423 024 Ar hanavaozana ny toerana ao Isotry
Efa misy ny toerana fandraisan ireo olona tsy manan-kialofana ao Isotry (Seba). Tsy nisy fikarakarana mihitsy anefa izany efa an-taona maro. Mitentina 71 423 024 Ar ny vola entina manavao izany mba ho azo honenana tsara sy hahatamana ireo tsy manan-kialofana.
Mikasa ny hamatsy fitaovana ho an’ireo 4’mi hapetraka ao ihany koa ny minisitera tompon’andraikitra.
Ankoatra ny famatsiana ara-pitaovana, heverina ihany koa ny tohana ara-tsaina sy ny fihainoana azy ireo ary ny torolalana hahafahany manarina ny fiainany. Hifanindran-dalana amin’izany ny fepetra horaisina amin’ny fampidirana azy ireo amin’ny sehatry ny asa, fanabeazana ho olom-pirenena vanona sy ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana.
Tsy hadino ireo ankizy satria heverina ny hisian’ny “sahan’ny ankizy” hahafahany milalao sy mivelatra ara-tsaina. Eo koa ny toeram-pitsaboana afaka mifindrafindra.